Vaovao - niseho tamin'ny fomba mahavariana i Flor Medical tao amin'ny Foara Iraisam-pirenena momba ny fitsaboana iraisam-pirenena (CMEF) faha-83 tany Sina.
Tamin'ny 19 Oktobra 2020, ny fampirantiana ny International International Equipment Equipment Medical (CMEF) faha-83 sy ny fampirantiana ny teknolojia famokarana teknolojia manerantany (ICMD) faha-30 dia nanokatra tamim-pahibemaso tao amin'ny National Convention and Exhibition Center Shanghai. CMEF dia nanomboka tamin'ny 1979 ary efa natao tamina vanimpotoana 82. Ny lohahevitr'ity CMEF ity dia ny "Teknolojia vaovao mitondra ny ho avy". Avy amin'ny loharano ka hatrany amin'ny terminal, manomboka amin'ny fomban-drazana ka hatrany amin'ny fanavaozana, hatrany Sina ka hatramin'izao tontolo izao, ireo marika eo amin'ny sehatry ny indostria dia mitondra sary ara-pahasalamana. , Amin'ny Diagnostika Vitro, Fitaovana orthopedika, Elektronika medikaly, Optika ara-pahasalamana, famerenana amin'ny laoniny sy fikolokoloana ny zokiolona, ​​fahasalamana marani-tsaina, finday sy telemedisin, Internet + fanafody sy vokatra kintana hafa dia haseho amin'ny fampirantiana.
Flor Medical dia manohy miezaka mba ho tonga lafatra. Miaraka amin'ny fahaiza-manao R&D matanjaka, nitondra vokatra vaovao indray izy tamin'ny fampirantiana fitaovana fitsaboana iraisam-pirenena China faha-83, nanjary zava-nisongadina indray teo amin'ny sehatry ny indostria. Amin'ity fampirantiana ity dia nitondra vokatra vaovao an'ny glucose glucose amin'ny rà, ny tosidra, ny ôtôniôma oxygen, ny hafanan'ny vatana ary ny tetikasa hafa i Flor Medical. Ny laharam-pahamehan'ny vokatra vaovao dia nahasarika mpandraharaha sinoa sy vahiny hijanona sy hijery sy hifampidinika ary hifampiraharaha. Mpanjifa liana marobe no nahatratra ny fikasana fiaraha-miasa teny an-toerana
Fetin'ny indostria ity fa fitsangatsanganana koa. Amin'ity fampirantiana ity, ankoatry ny fitondrana vokatra Flor vaovao ho an'ny mpanjifantsika, dia nitondra hevitra sarobidy maro koa izahay avy amin'ny mpampiasa sy mpivarotra farany.
Ny fampandrosoana tsy tapaka ny Flor Medical eo amin'ny sehatry ny fitaovana fitsaboana any an-trano dia tsy afa-misaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifanay sy ny fitiavany. Amin'ny ho avy, ny Flor Medical dia hanohy hiverina miaraka amin'ny kalitao avo lenta, avo lenta, avo lenta ary kalitao avo lenta ary fahombiazan'ny serivisy. Ry mpanjifa, miezaha ho mpamatsy fitaovana ara-pitsaboana azo atokisana.